LEGO ဒီဇိုင်နာသည်လျှို့ဝှက်ချက်အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Monkie Kid အစုံ
14 / 06 / 2021 14 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 345 Views စာ0မှတ်ချက် 80025 စန္ဒီရဲ့ပါဝါ Loader ကို Mech, 80026 Pigsy ရဲ့ခေါက်ဆွဲ Tank, 80028 အဆိုပါအရိုးနတ်ဆိုး, Justin Ramsden, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Monkie Kid, Ninjago, ဆိုင်မွန်, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ
၏ဖန်တီးသူ Lego Monkie Kid ဆောင်ပုဒ်ကဒီဇိုင်းအသင်းကိုဒီနွေရာသီရဲ့စုံတစ်ခုအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုကဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့သည်။
သုံးသစ် Monkie Kid မော်ဒယ်များအပါအဝင်ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိဖို့ရှိပါတယ် 80025 စန္ဒီရဲ့ပါဝါ Loader ကို Mech, 80026 Pigsy ရဲ့ခေါက်ဆွဲ Tank နှင့် 80028 အဆိုပါအရိုးနတ်ဆိုး။ ကြောင်းသုံး၏အဆုံးစွန်သောရှိပါတယ် ပြီးသားအသစ်တစ်ခုစံချိန်ထားကြ၏ အတွက် Lego ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် glow-in-the-dark element အရေအတွက်ကိုအုပ်စုဖွဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အစုံသုံးခု၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာအကြီးတန်းဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာဆိုင်မွန်လူးကပ်စ်ကြောင့်ပဲ Lego Group မှ၏ Co- ဖန်တီးသူ Ninjago နောက်ကွယ်က ဦး နှောက် Monkie Kid - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှမည်သို့အတူတကွစုစည်းနိုင်ကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် 80028 အဆိုပါအရိုးနတ်ဆိုး.
"[Lego ဒီဇိုင်နာ Justin Ramsden] ငါအဆောက်အ ဦး ကိုခရီးသွားဖို့ငါတကယ်ကြိုးစားခဲ့ part ပြဇာတ်၏ "ရှိမုန်အပေါ်ရှင်းပြသည် တွစ်တာ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းလိုမျိုးအဆင့်တိုင်းမှာစစ်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
သင်ချဉ်းကပ်မှုကမှသက်သက်သာပုံသဏ္pureာန်ယူမြင်နိုင်ပါသည် တရားဝင်ထားပုံများ, အရာပိုကြီးတဲ့မော်ဒယ်ဆန့်ကျင်ပယ်ရင်ဆိုင်ရဖို့မျိုးစုံသေးငယ်တည်ဆောက်သို့ခွဲထွက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသရုပ်ပြပါ Monkie Kid နှင့်မေ။ ဒါပေမယ့်တကယ်လို့အဲဒီမော်ဒယ်တွေကိုကိုယ့်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုကြည့်ပြီး 'အကြီးအကဲကြီး' ထဲမှာပေါင်းစပ်တာကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံချင်တယ်ဆိုရင် - သင်ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ထိုအရာကိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် 80028 အဆိုပါအရိုးနတ်ဆိုး မှာစတင်သည် LEGO.com.
← LEGO Super Mario Character Packs Series3ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်
LEGO နှင့်အတူ Euro 2020 ကိုကျင်းပပါ Ideas →